ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို ကျိတ်ကြွေနေကြောင်း သိစေမယ့် သူမရဲ. အမူအရာများ | Buzzy
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို ကျိတ်ကြွေနေကြောင်း သိစေမယ့် သူမရဲ. အမူအရာများ
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သင့်ကို တိတ်တိတ်လေး ကျိတ်ကြွေနေသလားဆိုတာကို ဒီအချက်တွေ သိထားရင် အလွယ်လေးသိနိုင်မှာပါ
(၁) သူမဟာ သင်နဲ့အတူတူရှိနေစဉ်မှာ အနေရခက်တဲ့ အမူအရာမျိုး ရှိတက်ပြီး ၊ ဆံပင်တွေကို ဆေ့ာကစားရမလိုလို ဖုန်းပဲသုံးရမလိုလို ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ သင်နဲ့စကားပြောချိန်မှာ မျက်လုံးချင်းကြည့်ဖို့ ရင်မဆိုင်ရဲပဲ ပြုံးပဲ ပြုံးနေပါလိမ့်မယ်
(၁) သူမဟာ သငျနဲ့အတူတူရှိနစေဉျမှာ အနရေခကျတဲ့ အမူအရာမြိုး ရှိတကျပွီး ၊ ဆံပငျတှကေို ဆေ့ာကစားရမလိုလို ဖုနျးပဲသုံးရမလိုလို ဘာလုပျလို့ လုပျရမှနျး မသိတဲ့ ပုံမြိုးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ ။ သငျနဲ့စကားပွောခြိနျမှာ မကျြလုံးခငျြးကွညျ့ဖို့ ရငျမဆိုငျရဲပဲ ပွုံးပဲ ပွုံးနပေါလိမျ့မယျ
(၂) သူဟာ သင်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ ကိစ္စတွေမှာ မသိမသာ ငြင်းခုန်းပါလိမ့်မယ် ၊ သင့်ကို နောက်ပြောင်ပြီး တိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ် ၊ သင့်မျက်နှာဟာ ကြည့်မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့ ၊ ဒါဟာ သူ့ခံစားချက်ကို ကွယ်ဝှက်ချင်လို့ ပြုလုပ်တဲ့ အမူအရာမျိုးပါ။
(၂) သူဟာ သငျနဲ့ အဓိပ်ပါယျမဲ့ ကိစ်စတှမှော မသိမသာ ငွငျးခုနျးပါလိမျ့မယျ ၊ သငျ့ကို နောကျပွောငျပွီး တိုကျခိုကျပါလိမျ့မယျ ၊ သငျ့မကျြနှာဟာ ကွညျ့မကောငျးဘူးဆိုတာမြိုးပေါ့ ၊ ဒါဟာ သူ့ခံစားခကျြကို ကှယျဝှကျခငျြလို့ ပွုလုပျတဲ့ အမူအရာမြိုးပါ။
(၃) တစ်ခါတစ်ရံမှာ သူဟာ သင်နားမလည်နိုင်လောက်အောင် သင့်ရှေ့မှာ နာကျင်ပြပါလိမ့်မယ် ၊ ဒါဟာ သူမကို သင်ကချစ်စေချင်တာပါ ၊ ဒါပေမယ့်လည်း သူ့ခံစားချက်ကို ဖွင့်ပြောလို့မဖြစ် မျိုသိပ်ထားရလို့ တစ်စုံတစ်ရာ စိတ်မကျေနပ်တဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေတာပါ
(၃) တဈခါတဈရံမှာ သူဟာ သငျနားမလညျနိုငျလောကျအောငျ သငျ့ရှမှေ့ာ နာကငျြပွပါလိမျ့မယျ ၊ ဒါဟာ သူမကို သငျကခဈြစခေငျြတာပါ ၊ ဒါပမေယျ့လညျး သူ့ခံစားခကျြကို ဖှငျ့ပွောလို့မဖွဈ မြိုသိပျထားရလို့ တဈစုံတဈရာ စိတျမကနြေပျတဲ့ ပုံမြိုးဖွဈနတောပါ
(၄) သင်က သူမနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုတောင် သူမက အလေးထားပါလိမ့်မယ် ၊ သင်က သူမကို မကောင်းပြောရင် ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ် ၊ စနောက်ပြီးတော့ ပြောတာတောင် လက်ခံချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ၊ ဘာလို့ဆို သူမကို သင်က အကောင်းပဲ မြင်စေချင်တာမို့ပါ ၊ သင့်စိတ်ထဲမှာ သူမကို ဆိုးဆိုးရွားရွား တွေးမိမှာကို သူမက မလိုးလားပါဘူး
(၄) သငျက သူမနဲ့ ပတျသတျပွီး ဘာမဟုတျတဲ့ ထငျမွငျခကျြလေးတှကေိုတောငျ သူမက အလေးထားပါလိမျ့မယျ ၊ သငျက သူမကို မကောငျးပွောရငျ ငွငျးပယျပါလိမျ့မယျ ၊ စနောကျပွီးတော့ ပွောတာတောငျ လကျခံခငျြမှာမဟုတျပါဘူး ၊ ဘာလို့ဆို သူမကို သငျက အကောငျးပဲ မွငျစခေငျြတာမို့ပါ ၊ သငျ့စိတျထဲမှာ သူမကို ဆိုးဆိုးရှားရှား တှေးမိမှာကို သူမက မလိုးလားပါဘူး
(၅) သင်နဲ့ အမြဲတမ်း ဟာသတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ် ၊ သင်ရော အခြားသူတွေရော ဘယ်သူကမှ ရယ်စရာကောင်းတယ်လို့ မထင်ထားတဲ့ ဟာသမျိုးတွေ လျှောက်ပြောတာမျိုးပေါ့ ။
(၅) သငျနဲ့ အမွဲတမျး ဟာသတှလေုပျပါလိမျ့မယျ ၊ သငျရော အခွားသူတှရေော ဘယျသူကမှ ရယျစရာကောငျးတယျလို့ မထငျထားတဲ့ ဟာသမြိုးတှေ လြှောကျပွောတာမြိုးပေါ့ ။
(၆) သင့်ရဲ. စိတ်ဝင်စားမှု ရဖို့ကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတိုင်း ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် ။
(၆) သငျ့ရဲ. စိတျဝငျစားမှု ရဖို့ကို ဖွဈနိုငျခွရှေိတိုငျး ကွိုးစားပါလိမျ့မယျ ။
(၇) သင်နဲ့ ဆက်သွယ်မှုရဖို့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျမျိုး ပေးပို့ပါလိမ့်မယ် ၊ ပြီးရင် မှားပို့တာပါလို့ ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ သူမ သင့်အကြောင်းကို တွေးတောလွမ်းဆွတ်နေလို့ပါ
(၇) သငျနဲ့ ဆကျသှယျမှုရဖို့ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ မကျဆခြေျ့မြိုး ပေးပို့ပါလိမျ့မယျ ၊ ပွီးရငျ မှားပို့တာပါလို့ ပွောကောငျးပွောပါလိမျ့မယျ ။ ဒါဟာ သူမ သငျ့အကွောငျးကို တှေးတောလှမျးဆှတျနလေို့ပါ
(၈) သင်ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ ဘယ်တော့များ ရှိနေမလည်းလို့ အမြဲလိုလို သတိထားကြည့်ပါလိမ့်မယ် ၊ သင့် ပို့စ်အောက်မှာ အခြားကောင်းမလေးတွေ ဘယ်လိုကွန်မန့်မျိုး ပေးမလဲလို့ အမြဲလိုလို သတိထားကြည့်နေပါလိမ့်မယ်
(၈) သငျဖစျေ့ဘုချမှာ ဘယျတော့မြား ရှိနမေလညျးလို့ အမွဲလိုလို သတိထားကွညျ့ပါလိမျ့မယျ ၊ သငျ့ ပို့ဈအောကျမှာ အခွားကောငျးမလေးတှေ ဘယျလိုကှနျမနျ့မြိုး ပေးမလဲလို့ အမွဲလိုလို သတိထားကွညျ့နပေါလိမျ့မယျ
(၉) သင်က အခြားမိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ သူမက သဝန်တိုပါလိမ့်မယ် ၊
(၉) သငျက အခွားမိနျးကလေး သူငယျခငျြးတှနေဲ့ စကားပွောတဲ့အခါ သူမက သဝနျတိုပါလိမျ့မယျ ၊
(၁၀) သူမဟာ သင်ပြောတဲ့ စကားလုံးတိုင်းလိုလိုကို အမှတ်ရနေပါလိမ့်မယ် ၊ တစ်ခါတစ်လေ သင်တောင် မမှတ်မိတော့တဲ့ စကားတွေကို သူက မှတ်မိနေပါလိမ့်မယ်
(၁၀) သူမဟာ သငျပွောတဲ့ စကားလုံးတိုငျးလိုလိုကို အမှတျရနပေါလိမျ့မယျ ၊ တဈခါတဈလေ သငျတောငျ မမှတျမိတော့တဲ့ စကားတှကေို သူက မှတျမိနပေါလိမျ့မယျ
(၁၁) သင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အရာရာကို သူမက သတိထားမိနေပါလိမ့်မယ် ၊ သင်က ဘယ်အရောင်နဲ့ လိုက်ဖက်ညီမှု ရှိတယ် ၊ ဘယ်ဆံပင်ပုံနဲ့ လိုက်တယ် ၊ ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့ ကြည့်ကောင်းတယ် စသဖြင့်ပေါ့ ၊ ပြီးတော့ သူမဟာ သင့် ဖေ့စ်ဘုခ်ပို့စ်တွေအောက်မှာ အမြဲလိုလို comment ပေးတက်ပါသေးတယ်
(၁၁) သငျနဲ့ ပတျသတျပွီး အရာရာကို သူမက သတိထားမိနပေါလိမျ့မယျ ၊ သငျက ဘယျအရောငျနဲ့ လိုကျဖကျညီမှု ရှိတယျ ၊ ဘယျဆံပငျပုံနဲ့ လိုကျတယျ ၊ ဘယျအဝတျအစားနဲ့ ကွညျ့ကောငျးတယျ စသဖွငျ့ပေါ့ ၊ ပွီးတော့ သူမဟာ သငျ့ ဖစျေ့ဘုချပို့ဈတှအေောကျမှာ အမွဲလိုလို comment ပေးတကျပါသေးတယျ
(၁၂) သူမဟာ သင်နဲ့စကားပြောဖို့ ဘယ်တော့မှ မပျင်းပါဘူး ၊ သင်ပို့လိုက်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတိုင်းကို စာပြန်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဖုန်းခေါ်တိုင်း ပြန်ဖြေပါလိမ့်မယ်
(၁၂) သူမဟာ သငျနဲ့စကားပွောဖို့ ဘယျတော့မှ မပငျြးပါဘူး ၊ သငျပို့လိုကျတဲ့ မကျဆခြေျ့တိုငျးကို စာပွနျပါလိမျ့မယျ ၊ ဖုနျးချေါတိုငျး ပွနျဖွပေါလိမျ့မယျ
(၁၃) သင့်ကို မျက်ကန်းတစ်ယောက်လို ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ် ၊ သူမရဲ. လျှို.ဝှက်ချက်မှန်သမှ ထုတ်ပြောပါလိမ့်မယ် ။
(၁၃) သငျ့ကို မကျြကနျးတဈယောကျလို ယုံကွညျပါလိမျ့မယျ ၊ သူမရဲ. လြှို.ဝှကျခကျြမှနျသမှ ထုတျပွောပါလိမျ့မယျ ။
(၁၄) သူမဟာ အစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်တဲ့အခါ သင့်ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ် ၊ ညစာ စားဖို့ ရုပ်ရှင် ကြည့်ဖို့ စသဖြင့်ပေါ့
(၁၄) သူမဟာ အစီအစဉျတှေ ပွုလုပျတဲ့အခါ သငျ့ကိုပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစားပါလိမျ့မယျ ၊ ညစာ စားဖို့ ရုပျရှငျ ကွညျ့ဖို့ စသဖွငျ့ပေါ့
(၁၅) သူမဟာ သင့်ကို ပထမဆုံး မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးသူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
(၁၅) သူမဟာ သငျ့ကို ပထမဆုံး မှေးနဆေု့တောငျးပေးသူ ဖွဈပါလိမျ့မယျ ။
(၁၆) သူမဟာ သင်ရဲ. အနွံတာကို ခံပါလိမ့်မယ် ၊ တစ်ခါတစ်ရံ သင်က သူမအပေါ်မကောင်းခဲ့မိရင်တောင် သူမက သင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပြီး အနစ်နာခံပေးတက်ပါတယ် ။ သင့်ဖက်က အမြဲတမ်းရပ်တည်တက်သူပါ ။
(၁၆) သူမဟာ သငျရဲ. အနှံတာကို ခံပါလိမျ့မယျ ၊ တဈခါတဈရံ သငျက သူမအပျေါမကောငျးခဲ့မိရငျတောငျ သူမက သငျ့ကို ခှငျ့လှတျပွီး အနဈနာခံပေးတကျပါတယျ ။ သငျ့ဖကျက အမွဲတမျးရပျတညျတကျသူပါ ။
ကဲ ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးကို သင်ကဘာလို့ ပြန်မကြိုက်ပဲနေမှာလဲ ၊ သူမခံစားချက်ကို နားလည်သင့်ပါပြီ
ကဲ ဒီလောကျကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးကို သငျကဘာလို့ ပွနျမကွိုကျပဲနမှောလဲ ၊ သူမခံစားခကျြကို နားလညျသငျ့ပါပွီ